महाबिर पुनलाई अमेरिकामा सम्मान, आर्थिक सहयोग गर्नेको ताँती…. – HKNepal.com – हङकङबाट सञ्चालित पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
महाबिर पुनलाई अमेरिकामा सम्मान, आर्थिक सहयोग गर्नेको ताँती….
विजय थापा/ एचकेनेपाल डट कम –
अमेरिकामा महावीर पुनलाई ओहायो राज्यका दुई शहरका नगर प्रमुखले सम्मान गरेका छन्। गत महिनादेखि अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापकलाई गत जुलाई ६ का दिन सम्मान गरेका हुन्।
डा पुनले नेपालकालागि गरेको योगदान स्वरुप उनलाई सम्मान गरेको हो भने यो समस्त नेपाल र नेपालीको गौरवको बिषय हो । नेपालको विकासकोलागि र आर्थिक उन्नति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसहित स्थापित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत थुप्रै सामाजिक कार्यहरू गरि सकेको छ।
ओहायो राज्यको चिलीकथि शहरका नगर प्रमुख ल्युक एम फिनीले अफिस अफ दि मेयर प्रोक्लामेसन अर्थात् नगर प्रमुखको कार्यालयको घोषणा भनि एक सम्मान पत्र डा पुनलाई हस्तान्तरण गरेका छन्।
यसै गरी ओहायोको रेनोल्डसबर्ग शहरका नगरप्रमुख जो बेगेनिले समेत अफिस अफ दि रोकोग्निसन ओफ महाबिर पुनभनि सम्मान पत्र हस्तान्तरण जुलाई ६ का दिन गरेका छन्।
पुन हाल अमेरिकाको विभिन्न राज्यहरूमा भ्रमण गर्दै नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया र भेटघाट कार्यक्रममा व्यस्त रहेको समयमा उनलाई ओहायोका दुई शहरका नगर प्रमुखले बोलाएर सम्मान गरेका हुन्।
अमेरिकामा अत्यधिक नेपाली समुदायसँग गरिएको अन्तरक्रिया र भेटघाट कार्यक्रममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई ठूलो आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ । र ,सबै नेपालीले सक्ने सहयोग गरि रहेका छन् । आर्थिक सहयोग मात्र नभई केन्द्रलाई आफूले विदेशमा आर्जन गरेको शिप र ज्ञान पनि सहयोग गर्ने वचनबद्धता र प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।
डा पुनले सुरुदेखि नै आर्थिक सहयोगको लागि मात्र नआएको भनि पटक पटक स्पष्ट परेका छन् भने तर समुदायले पुनको कुरा सुनेपछि स्वत स्फूर्त रुपमा सहयोग गर्नेको ताती लागेको छ।
आफै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई निरन्तर रुपमा सहयोग गर्ने सबैले बचन दिएका छन्।
अमेरिकाको भ्रमणको लागि सामाजिक अभियन्ता सन्तोष सापकोटाले डा पुनलाई अमेरिकाको भ्रमणमा ल्याउन संयोजन गरेका हुन्। हाल सम्म ६.५ करोड पर्ने ५५ वटा वायु प्रवाहक (भेन्टीलेटर )सहित अन्य आर्थिक संकलन गर्दै करिब १० करोडको सहयोग नेपाल भित्रिने अनुमान छ।
Tags: अमेरिका, महाबिर पुन, सम्मान, सहयोग